Iholide lomndeni eYurophu lingaba mnandi kakhulu kubazali nezingane zeminyaka yonke uma uhlela kahle. IYurophu izwe lezinqaba namabhuloho, amapaki aluhlaza okotshani, kanye nezinqolobane lapho amantombazane nabafana abancane bezenza sengathi bangamakhosazana namakhosana usuku. Bangu izindlela ezinhle zokuhamba izintaba nezindawo eziningi zokuzidela ngaphandle okukhulu, kodwa ukuhamba nezingane kuyinselele.
Imfihlo eholidini elikhulu lomndeni kulapho wonke umndeni usemkhunjini futhi ujabule. IYurophu igcwele izimpawu zomhlaba ezimangalisayo, ezikhangayo, amapaki wokuzijabulisa, nezindawo ongazivakashela, futhi nokwenza izingane zakho zibambe iqhaza ekuhleleni uhambo lwakho oluya eYurophu kuzophenduka iholide lamaphupho. Yenza ucwaningo lwakho kusengaphambili, khetha okuhehayo ofuna ukuvakashela, futhi amabala izingane zakho angathanda, bese ukhetha izingane 3-4 okukhangayo ohlwini. Ngale ndlela wonke umuntu uyajabula futhi unokuthile abheke phambili kukho nsuku zonke.
Amapaki amaningi ayatholakala nge isitimela ukusuka izikhungo ezinkulu zedolobha. Uma uhlela kusengaphambili futhi woza uzilungiselele, asikho isizathu sokuthi kungani kungafanele ujabule ngaphandle okukhulu futhi ujabulele umoya ohlanzekile, amahlathi, namapaki anetimu.
Ukwazi indlela yakho yokuzulazula kwenye indawo kubalulekile lapho uhamba nezingane. Awufuni ukulahleka futhi uzulazule edolobheni ngezinyawo noma uhambela esikhumulweni sezindiza, kungakhathalekile ukuthi isimo sezulu sinjani. Ngakho-ke, ukuhlela nokubhuka izindlela zakho zokuhamba eYurophu kuzothembisa iholide lomndeni elihle.
Kufanele wazi ukuthi izindawo zokudlela eYurophu azinikezi izingane ukudla, ngakho-ke ngabantu abadala’ izingxenye zawo wonke umuntu. Lokhu kubaluleke kakhulu ukuthi uqaphele isibonelo uma uhambela i-Italy, ngeke uthole usayizi wezingane we-pizza noma izingxenye ze-pasta, ngakho-ke lungela.
Ungazenzela ngokwakho ngemephu nezincwadi nezinhlelo zokusebenza, kepha ukujoyina isikebhe noma uhambo lokuhamba ngezinyawo kungcono kakhulu. Emadolobheni amaningi aseYurophu kukhona izinkambo zokuhamba zedolobha lamahhala nomhlahlandlela wendawo. Lo mhlahlandlela ojabulayo uzobonisa futhi utshele izimfihlo ezigcinwe kahle zedolobha, ngaphandle kokuthi ulahleke emigwaqweni ’emigwaqweni. Umhlahlandlela uzokhomba nezindawo zokudlela zasendaweni ezinamamenyu asethelwe kwasemini futhi anikeze izeluleko ezinhle kakhulu zalokho okufanele ukwenze edolobheni.
Iningi lamadolobha aseYurophu lizoba ne-carousel ekhanyayo nenhle ku isikwele esikhulu sedolobha. Esikhundleni sokugijimela esizeni esilandelayo, Ima, futhi uvumele izingane ukuba ziqhubeke nokugibela okuningi njengoba zifuna. Ukujabulela ukuhamba nge-carousel lapho i-Eiffel Tower ingemuva kwakho, impela umzuzu okhumbulekayo wezinsana nabantu abadala.
Ngoba nje useSwitzerland, akuqinisekisi ukuthi konke kuzohamba kahle ohambweni lwakho lomndeni. Lapho uhamba nezingane, noma yini ingenzeka, ngisho naseYurophu, ngakho-ke qiniseka ukuthi ushiya isikhathi sama-oops ohambweni. Yenza isikhathi sezimanga ezingahlelwanga, ukubambezeleka, izinguquko ezinhlelweni ngenxa yezingane ezinomsindo, futhi ubekhona futhi ukulungele ukuzivumelanisa.
IYurophu iyindawo enhle yamaholide omndeni nganoma yisiphi isikhathi sonyaka. Noma ngabe ungumndeni ofuna ukuzijabulisa noma othanda ukubona indawo kanye neminyuziyamu, IYurophu inakho konke. Ngaphezu kwalokho, IYurophu inobungani emndenini uma kukhulunywa ngezinto zokuhamba kanye namaphasi akhethekile edolobha. Esethu 10 amathiphu amahle kakhulu eholide lomndeni eYurophu azoba usizo olukhulu lapho uhlela uhambo lwakho olulandelayo noma lokuqala ngisho lokuya ezweni lezinqaba nezinganekwane.
Ngabe ufuna ukushumeka okuthunyelwe kwebhulogi lethu “Izeluleko Ezinhle Eziyi-10 Zokuphumula Komndeni EYurophu” kusayithi lakho? Ungakhetha ukuthatha izithombe zethu nombhalo futhi asinike credit enesixhumanisi lokhu post blog. Noma chofoza lapha: https://iframely.com/embed/https://www.saveatrain.com/blog/tips-family-vacation-europe/?lang=zu ‎- (Skrolela phansi kancane ukubona Shumeka Ikhodi)
Ama-Europewithkids iholide lomndeni ukulele I-Familytripeurope ukuvakashelwa komndeni umabhebhana